Iimagnethi zebhotile ezivulekileyo zebhotile zinokuba luncedo kwaye igama lakho lokwazisa liya kukhunjulwa ngalo lonke ixesha zisetyenziswa.
Iimagnethi zethu zePromo-Flex zefriji zihlala zomelele kwaye zilula - zizinto ezincomekayo zokukhuthaza ngomnyhadala okanye ukukhuthaza inkampani.
Uyilo lweemagnethi zefriji ze-2D kunye ne-3D ziphumelela kwinto ebaluleke ngakumbi.
I-HOLLOW BOOKMARK kunye nomlawuli unomgangatho we-2D, ofumanekayo kwindawo eqaqambileyo okanye yokugqiba i-antique.
Abahombisi beKrisimesi bayila imiboniso ekhanyayo eyahlukileyo kwipropathi nganye esiyihombisayo, fumana ukuba singenza njani ukuba iKrisimesi yakho ikhazimle ngesitayile kunye neklasi.